February 2011 edited February 2011 in Web Base
မည်သည့်သင်တန်းတွေတက်ရမလဲ၊ပြီးတော့ သင်တန်းကြေးရယ် တိတိကျကျလေးပြောပြမယ်ဆိုရင် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မှာပါ။
ရန်ကုန်ကဆိုရင်တော့ MICT Park ထဲမှာ ကောင်းပါတယ်။ Creative တို့ m3wi တို့လည်းကောင်းပါတယ်။ သင်တန်းကြေးတော့မသိပါ.
Tech News မဟုတ်တဲ့အတွက် Software -> Web Base အောက်ကိုရွှေ့ထားပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ Web ပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာရွေးချယ်စရာ သုံးခုပဲရှိပါတယ် JAVA ,PHP,.NET ပါ :P အရင်က programming အခြေခံရှိပြီးသားဆိုရင် တော့ JAVA ဆို Software Solution with JAVA ဆိုတဲ့အတန်းကစတတ်ရပါတယ် သင်တန်းကြေးကတော့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတစ်သိန်း တစ်ချို့နေရာတွေ မှာ တစ်သိန်းနှစ်သောင်း လောက်ပေးရပါတယ် .NET ဆိုရင် .NET FrameWork with OOP ဆိုပြီးစတတ်ရတတ်ပါတယ် သင်တန်းကြေးကတော့ ဂျာဗား နဲ့တူတူလောက်ပါပဲ နောက်ပြီးရင် JAVA မှာဆိုရင် Web JAVA ဆက်တတ်ရပါတယ် သင်တန်းကြေးကတော့ ၁၅၀၀၀၀ကနေ ၁၇၀၀၀၀ ၀န်းကျင်ပါ .NET ဆိုရင် လဲASP.NETဆက်တတ်ရပါတယ် သင်တန်းကြေးကWeb JAVA နဲ့တူတူလောက်ပါပဲ PHP ကတော့ PHP&MySQL ဆိုတာမျိုးတတ်ရပါတယ် တချို.ကလဲ အဲ့ဒါပဲ တစ်ချို.ကတော့ Zend FrameWork ဆက်တတ်ကျတယ်..သင်တန်းကြေးတွေကတော့ ခုနက ဟာတွေနဲ့တူတူလောက်ပဲ...တစ်ခုအကြံပေးချင်တာ သင်တန်းမတတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး တတ်ပါ ဒါပေမယ့် သင်တန်းက ကိုယ့်ကို အခြေခံနဲ့ Concept ပဲပေးနိုင်တာပါ တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ Web Developer ဖြစ်ချင်ရင် Self Study လဲအားကောင်းဖို.လိုပါတယ် သင်တန်းပဲ အားကိုးပြီး Self Study မလုပ်ရင်တော့ တကယ် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်၀င်တဲ့အခါ အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရနိုင်ပါတယ်ဗျ...............
read following link first , please
ကိုကို T.K ပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျ......ဒီသင်တန်းနှစ်ခုလုံးသူ့ဟာနဲ့သူကောင်းကြပါတယ်ဗျ.......အဟဲ...ဒါပေမယ့်....စာကြိိုးစား assignment မှန်မှန်လုပ်မှ web developer ကြီးဖြစ်မယ်...နော့.....:)):)):)):))
Let me link to this discussion . despite of being old , still fresh for newbie like me .